Afrika ‘habaaran’ (WQ: Cabdiqaadir Dayib Askar) | Somaliland Today
← Golaha Deegaanka Hargeysa; Xaabo Ay Bulshadu Qiiq Uun Ka Dhaxashay!-W/Q: Maxamed Fu’aad Xasan Dhago-Cadde
Wax Ka Baro Xanuunka Gaastarida Iyo Waxa Uu Yahay W/Q:- Maxamed Shucayb Axmed. →
Afrika ‘habaaran’ (WQ: Cabdiqaadir Dayib Askar)
Afrika dhasheedii baa dheeshay! Waxa u kacay hoggaamiyaal tuuggo ah, oo aan toodda mooyee, ta dadkooda u tudhin. Afrika maanta, dadka inoogu maal-qabeensan waa ‘masuuliyiinta’ aynu masiirkeena ku aaminay. Waayo waxa ay muddo kooban ku tabcadaan dhaqaale tirro badan oo aanay hawl iyo halgan midna u marin. Dakhli uga yimid cashuurta ay bixiyaan gacmaha faxalka ah ee wadhatadda iyo danlayda. Barri ilaa galbeed, waqooyi ilaa koonfur; Afrika waxa lagu salliday hoggaano aragti gaaban, oo ku mamay hantida yar ee shacabkooda. “Waa nabar ku yaalla dammiirka bini-aadamnimadda,” ayuu ku tilmaamay Toony Blair, Raysal Wasaarihii hore ee Ingiriisku.
Durbaannadda loo tumo collaadahu, ma aha kuwo marnaba codkoodu naaqusmo. Qulqulatooyinkii Isir-nacaybka ah ee ka jira guud ahaan Afrika: ka bilow Soomaaliya, Itoobiya, Ruwaanda ilaa Koonfur Afrika, waxa ay markhaati cad u tahay in ay Afrikaanku sii kala fogaanayaan oo fahanka dhexdoodu sii lumayo. Waxa adag in la sharaxo, sababta Afrikaanku iskugu muuqdaan, ee uu ugu ciil-baxayaan gumaynta walaalahooda madow ee kale.
Afrika waa in ay ka baxdaa nidaamka aqooneed ee ka madhan ficilka, kunna kooban tebinta aragtiyo aan ka shaqaynayn halkan. Waa in Afrika jiho cusub u jeedsataa, si sayniska iyo teknoolajiyadu u noqdaan kuwo ka taabo-gala qaaraddan.
Cabdiqaadir Dayib Askar waa barre jaamacadeed oo takhsuskiisu yahay Xidhiidhka Caalamiga Iyo Diblumaasiyadda. Kala xidhiidh e-mailkiisaabdikadiraskar@gmail.com amma booqo degelkiisawww.siraskar.wordpress.com.